Raascasayr:Khadadkii Telefoonada Degaankaas oo Dib Loo Furey Kadib 6 Maaalmood oo ay Hawada Ka Maqneed | raascasayrmedia.com
← Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in xukuumadda iyo baarlamaanku uu waqti ka dhammaanyo bisha Ogoosto
Madaxwayne Dooxajoog iyo Waftigi uu hogaaminaayay oo ku soo laabtay Magaalada Caluula →
May 12, 2011 · 5:49 pm
Raascasayr:Khadadkii Telefoonada Degaankaas oo Dib Loo Furey Kadib 6 Maaalmood oo ay Hawada Ka Maqneed
Wararka ka imanaya Degaanka Raascasayr State ayaa sheegaya in khadadkii Telefoonada Degaankaasi dhawaanahan jarnaa uu hawada dib ugu soo laabtay.
Arintan ayaa ka danbaysay ka dib markii faroole cadaadis lagu saarey in uu siidaayo isgaarsiinta degaankaasi.
Muddo dhan 6 Maalmood waxaa hawada ka maqnaa Isgaarsiinta degaanka raascasayr state. waxaa hada wici kartaa magaalo walba oo ka tirsan Degaanka Raascasayr state.
2 responses to “Raascasayr:Khadadkii Telefoonada Degaankaas oo Dib Loo Furey Kadib 6 Maaalmood oo ay Hawada Ka Maqneed”
ascww dhamaan .
ugu horeen waa guul kale oo soo noqotay rascaseyr state ,ilaah baana mahadaa leh aadane ma laha,tan xigtaa waxarka garowe waa tii aan hor u sheegnay in uu yahay miskiin aan la heen xishood iyo akhlaaq intaba oo yaqaan kaliya in dadka lakala dilo ,wax uu gonkarana malaha ee labada nin ee goolis maamulaa ayaa goyay khadka telefoonka dib marki uu ku yiri ina adeer ii samay oo khadka ka goo.
cida kale ee la sheegay ee ugu tagay in khad loo furo waa ayaga i shakhsigooda cid ay mathilaan ma jirto ,kabaqaad iyo dhuuni raacna meel walba ayuu taagan yahay na ay mathilaan oo beelwaynta bayan mathilin shacabka iyo dowladda rascaseyr state way ka soo horjeedaan
umadeena waxay aamin sanyiihiin dowladooda rascaseyr iyo beeldaajahooda cidkale oo mathilikartana ma jirto.
shirkadda telefoonkana waa in aad ka cayrisaan oo aad keentaan shirkad kale oo aad u dhiibtaan dad deegaanka ka tirsan oo beesha u shaqeeya oo maal galin gashada adeegaa,shirkad kasta oo la shaqaysa waxarka garoowena waa sidaa la yeelaa oo go aankaa aan marna la ga leexan.
asc waxaa meeshaas ka cad faroole in uusan hayn wax awood ah uu rasacasayr wax uuga qaban karo awoodiisa waxey noqotay in uu jaro isgaarsiinta awood kale waa waayay waana ku ceeboobay faroole iyo asxaabtiisa waana ku fashilmay mida kale qof mowqifkiisa in uu cad yahay baa fiican